प्रभासले विवाह गर्दै ! यी व्यापारीकी छोरीसँग मागी विवाह गर्ने | Ratopati
प्रभासले विवाह गर्दै ! यी व्यापारीकी छोरीसँग मागी विवाह गर्ने
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २६, २०७७ chat_bubble_outline0
साउथ सुपरस्टार प्रभास ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरेका कारण चर्चामा आइरहेका छन् । तर यसका साथै बाहुबली स्टारको लभ लाइफमा पनि धेरैले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । प्रभास साउथ सिने जगतका मोस्ट ह्यान्डसम ब्याचलर मानिन्छन् । यता नायिका अनुष्का शेट्टी पनि अहिलेसम्म अविवाहित छिन् । यी दुईले थुप्रै फिल्ममा काम पनि गरेका छन् । बाहुबलीमा यी दुईको जोडीले त तहल्का नै मच्चाएको थियो ।
त्यतिबेला देखि नै प्रभासको नाम तेलुगु फिल्मकी लेडी सुपरस्टार भनिने नायिका अनुष्का शेट्टीसँग नाम जोडिने गरिन्छ । यद्यपि, यी दुईले आफूहरु एक राम्रा साथी मात्रै भएको बताउने गर्छन् ।
तर हालै भारतीय मिडियाले एउटा यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रभासको विवाह हुन लागेको खबर प्रकाशित छ ।
भारतीय मिडियामा प्रकाशित खबरलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रभास अब चाँडै नै विवाहको तयारीमा छन् । टलिउड डट नेटको रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रभास अमेरिकास्थित एक सफ्टवेयर कम्पनीका संस्थापककी छोरीसँग विवाह गर्ने योजनामा छन् । यो एक मागी विवाह हुनेछ । यसका लागि दुबैको परिवारबीच कुराकानी पनि सुरु भइसकेको छ । प्रभासले यो सम्बन्धका लागि हरियो झण्डा पनि देखाएको खबरमा उल्लेख छ । यससँगै साउथ सुपरस्टारको विवाहको तयारीका लागि परिवार लागीपरेको पनि बताइन्छ ।
गोबिन्दालाई सम्झिँदै भावुक भए कृष्णा अभिषेक : भने, ‘मेरा बच्चा उहाँसँग खेलेको हेर्न चाहन्छु’
मुमताजको थियो विवाहेत्तर सम्बन्ध : भनिन्, ‘त्यो एउटा चरण मात्रै थियो, निकै थोरै समय रह्यो’
मिथुन चक्रवर्तीलाई के भयो ? अस्पतालमा भर्ना भए, छोराले दिए जानकारी
सोहेल–सीमा : सोहेल खानसँग विवाहका लागि तयारी थिएनन् सीमाको परिवार, भागेर गरेका थिए विवाह
विवाद पछि आमिर खानकी छोरी आइराले पुनः सेयर गरिन् बिकिनी फोटो
घोराहीमा गठबन्धनलाई पछि पार्दै एमालेको अग्रता
स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो नतिजा : अघि बढ्यो काँग्रेस, पछिपछि एमाले
बेलकोटगढी नगरपालिकामा उपमेयरमा कडा टक्कर, लामाले बनाए दोब्बर मतको अग्रता